Villa Vista - I-Airbnb
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguAleksandra
Indlu yethu isembindini welizwe lewayini (iindawo ezine zokwenza iwayini kwilali) kunye nommandla wembali waseSerbia. Kufuphi nakhona kukho i-spa yemigodi (iikhilomitha eziyi-10) kunye ne-monestary kwintaba yaseVencac. Indawo entle esuka ngqo kwindawo yethu ineentaba ezintathu nendawo entle. Ilungele ukuzingela ukuhamba ngebhayisekile kunye nokuhambahamba kwendalo. Indawo yasebukhosini kunye necawa yaseSt George kunye nemosaic edumileyo ikude ngeekhilomitha eziyi-4 kuphela.. kwisixeko esinembali saseTopola. Kule ndlu kukho imithi yeziqhamo ezahlukahlukeneyo...
Le ndlu yabucala ibe ingqongwe bubuhle nendalo kunye neetshona zelanga ezintle.
Le lali ibonakala kakuhle ibe intle kakhulu. NgoJulayi nyaka ngamnye kukho indawo yokusebenzela neyobugcisa. Umdlali wentenetya odumileyo wehlabathi uDjokovic naye ungumnikazi wewayini eLipovac kunye nedolophu enembali yaseTopola uhamba imizuzu eyi-45 ukusuka endlwini. Kwiinyanga zasehlotyeni kukho imiboniso emininzi yobugcisa e-Topola kunye nokutya okumnandi kwasekuhlaleni kunye nehagu edumileyo kunye nokuqhotswa kwegusha ngokuziqhenya.
Umhlobo wam uza kwamkela undwendwe kuba sihlala eBelgrade ekumgama weekhilomitha eziyi-80